ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ နာရေးကို လာမေးကြတိုင်း အတိုင်းမသိ နာကျင်ရတာလို့ စာနာပေးဖို့ တောင်းဆိုလာတဲ့ ရွေရည်သိန်းတန် – One Daily Media
တတိယလှိုင်း အနေနဲ့ တစ်ကျော့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါကပ်ဆိုးကြီးက အရင်ထက် ပြင်းထန်တာကြောင့် သေဆုံးကြသူတွေလည်း မနည်းခဲ့ပါဘူး ။ ကိုယ်ချစ်ခင်ရသူတိုင်းကို မထင်မှတ်ထားဘဲ ဆုံးရှုံးကြရလို့ ပူဆွေးသောကရောက်ကြရပါတယ် ။
မကြာခင်ကဆိုရင်လည်း အဆိုတော် ရွှေရည်သိန်းတန်ရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ သူမ အနေနဲ့လည်း ဒီလို အခြေအနေတွေမှာ များစွာပူဆွေးသောကရောက်နေခဲ့ပါတယ် ။
အခုလည်း သူမခင်ပွန်းရဲ့ နာရေးကို သတင်းလာရောက်မေးကြတဲ့ အပေါ်မှာ ရင်နှင့်အမျှခံစားနေရချိန်မို့ နားလည်ပေးကြဖို့ကို “
ကျွန်မသူများနာရေးသတင်းမေးရင်..ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆုံးတာလည်းလို့..တခါမှမမေးဖူးခဲ့ပါဘူး..တခါရှင်းပြရတိုင်းအကြိမ်ကြိမ်နာကျင်ရတဲ့.ကျန်ရစ်သူရင်ထဲကဆုံးရှုံးမှုကို စာနာလို့ပါ..ကျွန်မကိုလည်း..စာနာပေးရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့လည်းတောင့်တမိတယ်..သူ..ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး..ချစ်လွန်းလို့ကျွန်မသဝန်တိုရမစိုးလို့..နှလုံးသားထဲအရောက်သေးသေးလေးချုံ့ထည့်ထားလိုက်တာပါ…ရင်ဘတ်ကိုခွဲထည့်ရတာမို့..နာကျင်မှုကတော့သွေးပျက်မတတ်ပေါ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်. သူကျွန်မနှင့်အတူရှိနေပါတယ်..” ရေးသာစဖော်ပြထားရာ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
ခင္ပြန္းျဖစ္သူရဲ႕ နာေရးကို လာေမးၾကတိုင္း အတိုင္းမသိ နာက်င္ရတာလို႔ စာနာေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုလာတဲ့ ေ႐ြရည္သိန္းတန္
အခုလည္း သူမခင္ပြန္းရဲ႕ နာေရးကို သတင္းလာေရာက္ေမးၾကတဲ့ အေပၚမွာ ရင္ႏွင့္အမွ်ခံစားေနရခ်ိန္မို႔ နားလည္ေပးၾကဖို႔ကို “
ကြၽန္မသူမ်ားနာ​ေရးသတင္း​ေမးရင္..ဘယ္လိုျဖစ္လို႔ဆုံးတာလည္းလို႔..တခါမွမ​ေမးဖူးခဲ့ပါဘူး..တခါရွင္းျပရတိုင္းအႀကိမ္ႀကိမ္နာက်င္ရတဲ့.က်န္ရစ္သူရင္ထဲကဆုံးရႈံးမႈကို စာနာလို႔ပါ..ကြၽန္မကိုလည္း..စာနာ​ေပးရင္သိပ္​ေကာင္းမွာပဲလို႔လည္း​ေတာင့္တမိတယ္..သူ..ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး..ခ်စ္လြန္းလို႔ကြၽန္မသဝန္တိုရမစိုးလို႔..ႏွလုံးသားထဲအ​ေရာက္​ေသး​ေသး​ေလးခ်ဳံ႔ထည့္ထားလိုက္တာပါ…ရင္ဘတ္ကိုခြဲထည့္ရတာမို႔..နာက်င္မႈကေတာ့ေသြးပ်က္မတတ္ေပါ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္. သူကြၽန္မႏွင့္အတူရွိ​ေနပါတယ္..” ေရးသာစေဖာ္ျပထားရာ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ ။